Asian Fame, Author at Popular ⋆ Page 393 of 394
သမီးဖြစ်သူကို အကယ်ဒမီ ပေးပွဲ ခေါ်ချင်ပေမယ့် မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း အကြောင်း ပြေတီဦးပြော
ပြေတီဦးက အကယ်ဒမီ ပေးပွဲကို ဇနီး ဖြစ်သူ အိန္ဒြာကျော်ဇင် နဲ့ တက်ရောက်ခဲ့သလို သမီးဖြစ်သူ ပြေသုဒြာ ကိုလည်း အကယ်ဒမီ ပွဲ ကိုခေါ်ဖို့ အတွက် စီစဉ်ခဲ့ပါသေး တယ်။ ဒီလို စီစဉ်ခဲ့ပေမယ့်လည်း ကလေးက…
အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု ပြေတီဦး(အာဒမ်ရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်) အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု သက်မွန်မြင့် (အာဒမ်ရယ်၊ ဧဝရယ်၊ ဒသရယ်) အမျိုးသားဇာတ်ပို့ ဆု ဝေဠုကျော်(ပင်လယ်ထက်က နေ၀န်းနီ) အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ ဆု ၀ါဝါအောင်(အမေ့ကျေးဇူးဆပ်ဖူးချင်တယ်)
“သူသာအကယ်ဒမီဆုရခဲ့ရင် ထိုင်ငိုမိမှာပဲဆိုတ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း ရဲ့ အကယ်ဒမီ ခံစားချက်”
‘အချစ်စိမ်းစိမ်း’ဇာတ်ကားကတည်းက ပရိသတ်တွေအသိအမှတ်ပြုလက်ခံလာတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းက အခုအချိန်မှာ ဇာတ်ကား တွေအများအပြားထွက်ရှိထားသလို လတ် တလောမှာလည်း ပြေတီဦး၊ထွန်အိန္ဒြာဗိုတို့နဲ့ အတူ တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ‘သံယော ဇဉ်အလင်းတန်း’ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးထဲမှာ လည်း ချစ်စဖွယ်ဟန်ပန်အမူအရာလေးတွေ ကို ပရိသတ်တွေက ကြိုက်နှစ်သက်နေကြ ပါတယ်။ ရှိုးလျှောက်တာကိုတော့…
အကယ်ဒမီပွဲတွေမှာ အစီအစဉ်တင် ဆက်သူနှစ်ဦးအဖြစ် ဆက်တိုက်တွေ့မြင်လာခဲ့ရတဲ့ ဦးကျော်သက်လင်းနဲ့ ဒေါ်မြမြဝင်းတို့ကို အစီအစဉ် တင်ဆက် သူကောင်းဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ပေးခဲ့တဲ့ . . .
နေမျိုးအောင်က ဒီနှစ် အကယ်ဒမီပွဲတက် ဝတ်စုံကိုတော့ ထူးထူးခြားခြားလေး ပြင်ဆင် ထားပါတယ်။ ပိုး အင်္ကျီအဖြူပေါ်မှာ ငွေချည်နဲ့ အနက်ရောင် စပ်ပြီး . . .
“အကယ်ဒမီပေးပွဲသွားတဲ့အခါ ရထားနဲ့သွားရတာ ပျော်ဖို့ ကောင်းသလို ပင်ပန်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ ဆရာ ချစ်ဦးညို”
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးဖြစ် တဲ့အကယ်ဒမီဆုပေးပွဲနီးကပ်လာပြီဖြစ်သလို အနုပညာရှင်၊အတတ်ပညာရှင်တွေကလည်း အခုအချိန်မှာ အကယ်ဒမီပွဲအတွက်ကိုပဲ အာရုံစိုက်နေသလိုအကယ်ဒမီပွဲကိုအဖွဲ့တွေနဲ့ စုံစုံညီညီသွားရတဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ် ဆရာချစ်ဦးညိုကို မေးကြည့်တော့ . . .
“မူပိုင်ချစ်သူ” ဇာတ်ကားတွင် သရုပ်ဆောင် ကျော်သူသည် ဆရာဝန် ဇာတ်ကောင်စရိုက်အား သရုပ်ဆောင်ရာတွင် ရှပ်အင်္ကျီ အပေါ်ကြယ်သီးအား ဖြုတ်ထားခြင်းကြောင့် အကယ်ဒမီဆုကို မပေးခဲ့တာဟူ၍ မြန်မာရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီ သင်ခန်းစာအား ရရှိခဲ့ပြန်သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု ချီးမြှင့်သည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ ပြုလုပ်မည့် အချိန်ရောက်တိုင်း မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ပရိသတ်များနှင့် ပြည်တွင်း မီဒီယာလောက အသိုင်း အဝိုင်းကြားမှာ လှုပ်ခတ် ပဲ့တင်ညံနေပြီး ဖီလင်အမျိုးမျိုး ရှိတတ်ကြပေ၏။
“အကယ်ဒမီဆုကို ပရိသတ်တွေ ပေးတာနဲ့တင် ကျေနပ်ပါပြီ လင်းဇာနည်ဇော်”
အကယ်ဒမီဆုကို ပရိသတ်တွေပေးတယ်ဆိုတဲ့ အသံကြားရတာနဲ့တင် ကျေနပ်ပါတယ်။ တအားကြီး မမျှော်လင့်ထားဘူး။ လူတစ်ယောက်က မျှော်လင့် ထားပြီးတော့ . . .
“အကယ်ဒမီ ငါးဆုရှင် မို့မို့မြင့်အောင် ရဲ့ အကယ်ဒမီ ရင်ဖွင့်သံ”
အကယ်ဒမီပွဲ သွားတက်ရတဲ့ ခရီးကလည်း ဝေးတဲ့အတွက် ကိုယ် ပန်ချင်တဲ့ပန်းကို ဝယ်ဖို့ အချိန်မရတဲ့ အခက်အခဲ၊ ပစ္စည်းတစ်ခု မေ့ကျန်ခဲ့ရင်လည်း ပြန်လှည့်ယူဖို့ အဆင်မပြေတဲ့ အခက်အခဲလေး တွေတော့ ကြုံတွေ့ရကြောင်း မို့မို့မြင့်အောင် က ပြောပါ တယ်။…